Ciidamada AMISOM iyo odayaasha dhaqanka oo kala qaaday ciidamadii isku hor fadhiyay magaalada Marka – idalenews.com
Ciidamada AMISOM iyo odayaasha dhaqanka oo kala qaaday ciidamadii isku hor fadhiyay magaalada Marka
Ciidamada AMISOM ee ka socda dalka Brundi iyo odayaasha dhaqanka ayaa maanta ku guuleystay inay kala qaadaan ciidamadii isku hor fadhiyay magaalada Marka, kuwaasoo dhowaan ku dagaalamay.
Sida ay sheegayaan wararka laga helayo magaalada ciidamadan oo hab beeleed u abaabulnaa, balse ka tirsanaa ciidamada dowladda ayaa tiro dhowr jeer oo hore iska hor imaad ku dhex maray gudaha iyo daafaha magaalada.
Mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in saaka odayaasha dhaqanka iyo Saraakiisha AMISOM ay isla garteen in ciidamadan la kala qaado, si magaalada aanay qal qal xaga ammaanka ah u gelin.
Goobaha ciidamada laga kala qaaday ayaa waxaa ka mid ah Xaruntii Hey’adda Kosovo ku laheyd gudaha magaalada, labada wado ee laamiga iyo xeebta ee soo gala magaalada Marka iyo koontaroolka magaalada, waxaana lagu arkay Ciidamada AMISOM oo ku hubeysnaa gaadiidka dagaalka, kuwaasoo roondo ku sameynayay meelihii ciidamada laga kaxeeyay.
Xaalada magaalada ayaa ah mid caadi ah, iyadoo aan wax ciidan lagu arkeyn, waxaana dadweynaha magaalada ay ku tilmaameen tallaabadan mid soo dhoweyn leh.
Shalay ayay aheyd markii la kala diray maamulkii magaalada Marka, kadib markii ay sii xoogeysatay khilaafkii ka dhashay gacan ka hadalka ee u dhaxeeyay dhinacyada ku magacaabnaa maamulka degmada oo maleeshiyaadkooda uu iska hor imaad dhex maray.
Madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay inay heli doonaan hubkii u horeeyay muddo labo bil gudahood
Boqolaal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda oo gudaha u galay magaalada Kismaayo